indibano yokwenziwa pcb - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Eyona iFabrikiyo yePCB kunye noMvelisi weNdibano-PCBFuture
Yintoni ukwenziwa kunye nokudityaniswa kwePCB?
Inkampani ibonelela ngokuyilwa kwebhodi engenanto kunye neenkonzo zokudityaniswa endlwini, kwaye isondela kunye notshintsho olungenamthungo phakathi kokwenziwa kwebhodi engenanto ukuya kwindibano.Abathengi baneodolo enye nje, i-invoyisi enye evela kumniki-nkonzo omnye.
Inkqubo yendibano ichazwa zizinto ezahlukeneyo - kubandakanywa uhlobo lwebhodi, amacandelo e-elektroniki, iteknoloji yendibano esetyenzisiweyo (oko kukuthi i-SMT, i-PTH, i-COB, njl.), iindlela zokuhlola kunye nokuvavanya, injongo yendibano ye-PCB kunye nokunye.Ezi zinto zonke zifuna inkqubo efuna isandla esizinzileyo, esinamava ukunceda ukukhokela ii-asethi kuzo zonke izigaba zemveliso.
Nokuba ufuna indibano ye-PCB, ukwenziwa kwe-PCB, indibano yomthwalo okanye indibano yokuthengwa kwezinto eziphathekayo, i-PCBFuture inezinto eziyimfuneko ukuze ulawule iprojekthi yakho yonke ngokufanelekileyo.Ngaphezulu kweminyaka eyi-10 yamava kwiinkonzo PCB, siye safunda ukuba iindleko indibano efanelekileyo, inkonzo ekumgangatho ophezulu, unikezelo ngexesha kunye nonxibelelwano olulungileyo izitshixo ukugcina abathengi bethu bonwabile kwaye yindlela esenza ishishini lethu impumelelo.
Inzuzo yokwenziwa kunye nokuhlanganisa iPCB?
1. Akukho zindleko zokuthwala ezihambelana nokuthumela iibhodi ezingenanto ngaphambi kokuhlanganisana, njengoko yonke imveliso yenziwa ngaphakathi kwindlu.Iibhodi ezingenanto zigqithiselwa nje ukusuka kwisebe lokwenziwa kwe-PCB ukuya kwenye yemigca yendibano.
2. Umngcipheko weempazamo uyacuthwa ngonxibelelwano olungcono phakathi kwamasebe, ngokuchaseneyo nokusebenza ngothotho 'lwamadoda aphakathi' nokuba kweli lizwe okanye phesheya kolwandle.
3. Iya kunciphisa amaxesha okukhokela kwaye ngaloo ndlela kuncitshiswe 'ixesha lokuthengisa', njengoko kungekho kulibaziseka okuhambelana nokulinda iibhodi ezingenanto ukuba zihanjiswe emva kokuveliswa.Ukuhanjiswa ngokukhawuleza njengoko oku kunceda ukugcina amandla omthengi.
4. Kwakhona kulula kakhulu ukongamela kunye nophicotho lwenkqubo yokwenziwa kwenkampani enye kunokuvavanya ezo ezininzi.Umzekelo Ukuba umthengi ufuna ukuxoxa ngeprojekthi okanye ukusombulula ingxaki yobugcisa, kuya kuba kubiza kakhulu kwaye kulunge ngakumbi ukutyelela umthengisi omnye kuphela.
Utyalo-mali olubalulekileyo kwizixhobo kufuneka lwenziwe phambi kokuba izinto ze-elektroniki zibekwe ngobuchwephesha kwaye zithengiswe kwiibhodi zakho zesekethe eziprintiweyo ezinje ngeeprinta zestencil ezizihambelayo, oomatshini bokuchola kunye nokubeka, ii-oveni zokukhupha kwakhona, oomatshini bokuhlola okuzenzekelayo (AOI), oomatshini beX-ray, oomatshini bokuthengisa abakhethiweyo, ii-microscopes, kunye nezikhululo ze-soldering.Ngenxa yokuba sizibophelele ekuhlangabezaneni nexesha lakho elihamba phambili kunye neemfuno zomgangatho sihlala sityala imali kwi-teknoloji yakutshanje kwi-SMT kunye nezixhobo zomngxuma.
Kutheni ukhetha thina iPCB Fabrication kunye neNdibano:
1. Iqela elibi leenjineli, abadwelisi beprogram, abaqhubi be-SMT, amagcisa okuthengisa kunye nabahloli be-QC.
2. Iziko elikumgangatho ophezulu elinee-SMT zamva nje kunye nezixhobo zokuphuma emngxunyeni esinazo ezona zixhobo zokuhlangabezana nazo zonke iimfuno zendibano yePCB yakho.
3. Sinokubonelelaindibano PCB turnkeyinkonzo eya kubonelela ngeyona bhodi yesekethe ishicilelweyo kwiiprojekthi zakho.
4. Inkqubo ye-intanethi yokucaphula kunye noku-odola inkqubo ye-intanethi.
5. Sisebenza ngokukhethekileyo ekubalekeni okuncinci kunye nokuphakathi kunye namaxesha okukhokela ngokukhawuleza.
6. ukubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo ngokuziswa kwangexesha ngamaxabiso akhuphisanayo kakhulu.
7. Zonke ii-PCB zethu ziqinisekisiwe nge-UL kunye ne-ISO.
8. Zonke ii-PCB zethu ze-Standard Specs PCBs zakhelwe kwi-IPC-A-6011/6012 yohlaziyo lwamva nje lweKlasi yesi-2 ngokuhlolwa okusekwe kwi-IPC-A-600 iClass 2 yohlaziyo lwamva nje, ngaphezu kweemfuno ezichaziweyo zabathengi.
9. Zonke iiBhodi zeSekethe eziShicileleyo zoMgangatho zivavanywa ngombane.
I-PCBFuture inceda abathengi ukuphucula ukusebenza, umgangatho, kunye neendleko kwibhodi yonke - zonke ngaxeshanye.Ngomkhondo wethu wehlabathi jikelele, ubunjineli, ubuchule bokwenza, ukuzinikela kophuhliso lwemveliso entsha/ukwazisa kunye nezixhobo zokuchwetheza, sinokuzisa ezona mveliso zikumgangatho ophezulu ukuthengisa ngokukhawuleza kunaye nawuphi na umntu okhuphisana naye.Sikulungele kwaye siyakwazi ukusebenzisa yonke inkcitho yethu yempahla yehlabathi kunye nezibonelelo ezinexabiso eliphantsi ukunika ukudlala ngokupheleleyo kwiinzuzo zakho kwaye sikuncede wena neqela lakho ukuba nifezekise izibonelelo ezinkulu malunga neendleko ezifanelekileyo kunye nembuyekezo kutyalo-mali.
Ÿ Ukwenziwa kwePCB
Ÿ INdibano yePCB
Ÿ Ukufumana izixhobo
Ÿ Iibhodi zeFR4 enye
Ÿ Iibhodi zeFR4 ezimacala amabini
Ÿ Ubuchwephesha obuphezulu bungaboni kwaye bungcwatywe ngeebhodi
Ÿ Iibhodi ezininzi
Ÿ Ubhedu olungqindilili
ŸIndibano ye-SMT PCB
Ÿ Ukuphindaphinda okuphezulu
Ÿ I-Multilayer HDI PCB
Ÿ Ukuguquguquka okuqinileyo
I-PCBFuture inenkxaso yenkonzo yobunjineli.NjengePCB&PCB indibano umenziayikwazi ukuqhubeka ngaphandle kwenkxaso yobunjineli.Iqela lethu leenjineli liqulunqwe ziinjineli ezininzi zamava.Phantse zonke iimveliso ezidumileyo banamava okuxhasa imveliso.Ngaphandle kwamava emveliso, ubunjineli obubuyela umva bungaphakathi kwinkonzo yabo.Injineli bahlala benika inkxaso eyomeleleyo yendibano yePCB.
Ukwenziwa kwePCB ethembekileyo kunye neNdibano.Iinkampani ezingaphezu kwama-2000 zisebenzisana nathi kuba zicinga ukuba sithembekile.Ngoku, abaninzi beza njengokuthunyelwa kubathengi abanelisekileyo.Ngenxa yetekhnoloji yamva nje, kuyenzeka ukuba usebenze kwaye uphumeze iiprojekthi zakho ngeendleko ezifanelekileyo kunye nobungqina bexesha elizayo.Inkxalabo yabathengi ihlala igxininisekile!
1. Kufuneka ndikhethe nini amacandelo?
Kunokuba lula ukukhetha amacandelo ekuqaleni kwenkqubo yoyilo.Le yeyona ndlela ilungileyo yokuqinisekisa ukuba akukho ngquzulwano phakathi koyilo lokwenene kunye namacandelo adityanisiweyo.Ukuba uqwalasela ubungakanani becandelo ukusuka ekuqaleni, akusekho mfuneko yokuba uqwalasele indawo yecandelo kunye nobungakanani, kwaye inkqubo yendibano yePCB inokuqhubeka ngaphandle kwemiqobo.
2. Uzithumela njani iibhodi.
Sithumela nge-DHL okanye i-UPS.
3. Kuthatha ixesha elingakanani ukufumana ikowuti?
Phantse kuzo zonke iimeko siyakucaphula ngosuku olunye lokufumana umbuzo, kwaye ngokwesiqhelo sinokulindela ukuphendula kwiiyure ezi-4.
4. Uyanikezela ngeenkonzo ezikhawulezileyo?
Inkonzo yethu ekhawulezileyo iqhelekile, iintsuku ezi-4 ukuya kwezili-10 zeprototype, kunye neentsuku ezi-5 ukuya kwiiveki ezi-4 zokuvelisa.
5. Ndingayenza njani imiyalelo ekhethekileyo?
Ungasithumela i-imeyile ekhankanya imiyalelo yakho ekhethekileyo okanye usithumelele ifayile ye-readme eneenkcukacha zakho.
6. Ziziphi iintlobo zovavanyo ezenziwa kwiibhodi zam ezidibeneyo?
a) UHlolo oluBonakalayo
b) Ukuhlolwa kwe-AOI
c) Ukuhlolwa kwe-X-Ray (ye-BGA kunye neendawo zokulinganisa ezicolekileyo)
d) Uvavanyo olusebenzayo (ukuba lufunwa ngumthengi)
7. Ngaba uyabonelela ngeenkonzo zokugquma ngokusesikweni?
Ewe, sinikezela ngeenkonzo zokugquma ngokusesikweni.Ngolwazi oluthe vetshe, nceda uqhagamshelane nathi ku:sales@pcbfuture.com.
8. Ngaba unikeza naziphi na izaphulelo?
Ewe, nceda uqhagamshelane nathi ku:sales@pcbfuture.com.
9. Loluphi uhlobo lwelaminayithi oyisebenzisayo kwimveliso yePCB?
Sisebenzisa ezahlukeneyolaminatesezifana ne-FR4, i-High TG FR4, i-Rogers, i-Arlon, i-Aluminium Base, i-Polymide, i-Ceramic, i-Taconic, i-Megtron, njl.
10. Ziziphi izinto ezigqityiweyo ezikhoyo?
I-HASL, i-HASL yasimahla, i-ENIG, iSilver yokuntywiliselwa, iTin yokuntywiliselwa, i-OSP, iGolide ePhilayo eBondayo, iGolide eNqinileyo.